Explore Fresh Fruits & Nuts Markets - MyanTrade
Buy from Myanmar
Key Sectors in MyanmarFind your supplier Visit our Virtual Marketplace
Guides to doing business in Myanmar How can MyanTrade help?
Export from Myanmar
Step Into Export Business
Exportable Products How to Export Tutorials Export Documentation Export Training Courses Visit Myanmar Trade Centre How can MyanTrade help?
Explore EU Markets
EU Market Scans and Reports Trade Statistics EU Regulations
How can MyanTrade help?
Register to Appear in the Exporter Directory Apply for Trade Fair Support Request Commercial Visa Recommendation Myanmar - EU Help Desk
About Us Contact Us Local News International News Announcements Ease of doing Business International Trade Fairs (Events) Newsletters Policies Laws
National Export Strategies
About NES NES Event Strategy Documents Rice Sector Pulses & Beans and Oil Seeds Fishery Sector
India USA Belgium Japan Hong Kong Thailand SingaporeKorea China
Regional Trade Centers
Myanmar Trade Center Yadanarbon Trade Center Ma Naw Myay Trade Center Zay Yar Trade Center Ayar Trade Center Phan Khar Myay Trade Center Yar Ma Nya Trade Center Kandarra Waddy Trade Center Maw Shwe Lee Trade Center Thazin Myay Trade Center Kanbawza Trade Center Zewkabin Trade Center Pyin Oo Lwin Trade Center
Explore Fresh Fruits & Nuts Markets
EU-Market Scans & Reports
Beans Pulses and Oilseeds
Fresh Fruits & Nuts
အီးယူ၏ သရက်သီးစိမ်း ပို့ကုန်စျေးကွက်သုတေသန (EU Export Market Scan-Fresh Mango)
သရက်သီးအမျိုးပေါင်း ၁၆၀ ခန့်ကို နိုင်ငံ(၉၀)ကျော်တွင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။
အီးယူသို့ သရက်သီး တင်သွင်းမှုမှာ နှစ်စဉ် မှန်မှန်တိုးတက်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၃ တွင် (၈၁၀၀၀) တန်မှ ၂၀၁၇ တွင် (၁၁၂၀၀၀)တန်အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ လက်လီရောင်း ချသူများသည် သရက်သီးအမျှင်များ (Fibrous Mangoes)ရောင်းချသည့် စျေးကွက်မှ ကျောခိုင်း၍စားသုံးသူများ(အထူးသဖြင့် အနောက်ဥရောပမှ) နှစ်သက်သည့် ခွဲစိတ်ရလွယ်ကူ သော သရက်သီး စျေးကွက် (Easy to Slice Mangoes) သို့ကူးပြောင်း လာကြပါသည်။ ဤစျေးကွက် ပြောင်းလဲလာမှုက မြန်မာနိုင်ငံမှ သရက်သီးတင်သွင်းသူများအတွက် အခွင့်သာစေပါသည်။
အီးယူပြင်ပနိုင်ငံများမှ သရက်သီးစိမ်းကိုအဓိကတင်သွင်းသည့် အီးယူနိုင်ငံမှာ နယ်သာလန် ဖြစ်ပါသည်။ အီးယူသို့ တင်သွင်းသော သရက်သီးစိမ်းအများစုကို ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ပြီး အခြားအီးယူ နိုင်ငံများနှင့် အီးယူပြင်ပသို့ ပြန်လည်တင်ပို့ပါသည်။ သရက်သီးစိမ်းကို အဓိကမှာယူ တင်သွင်းသည့် နိုင်ငံများမှာ ဗြိတိန်၊ ဂျာမဏီနှင့် ပြင်သစ်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံ များတွင် သရက်သီးစားသုံးမှုများစွာ လျော့ကျနေသော်လည်း ပိုလန်နှင့် ရိုးမေနီးယားတို့တွင်မူ သိသိသာသာမြင့်တက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဥရောပတွင် အော်ဂင်းနစ်ထုတ်ကုန်များ ရောင်းချနိုင်ရန် အတွက် အီးယူ၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကုန်စည်ပြပွဲများ တက်ရောက်ခြင်း၊ ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် အီးယူအဖွဲ့ဝင်နှင့် အသင်း အဖွဲ့များစာရင်းကို ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းဖြင့် အီးယူ၏ အော်ဂင်းနစ်စျေးကွက်(Organic Market) သို့ထိုးဖောက်ဝင် ရောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
Download Full Report in Myanmar Language
အီးယူစျေးကွက်သုတေသန (သီဟိုဋ္ဌ်စေ့)(EU Market Scan-Cashew Nut)
သီဟိုဋ္ဌ်စေ့(Cashew Nut)သည် ကျောက်ကပ်ပုံသဏ္ဍ်ရှိပြီး သီဟိုဋ္ဌ်သီး၏ အောက်ခြေတွင် တွယ်ဆက် လျက်ရှိသည်။ အီးယူသို့ သီဟိုဋ္ဌ်စေ့တင်သွင်းမှုနှုန်းသည် ၂၀၁၃ မှစ၍ ပမာဏအားဖြင့် ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် တန်ဖိုးအားဖြင့် ၂၆ ရာခိုင်နှုန်း နှစ်စဉ်တိုးတက်လျှက်ရှိပါသည်။ အီးယူ၏ သီဟိုဋ္ဌ်စေ့တင်သွင်းမှုသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၁၉၀၀၀၀ တန်( ယူရို ၁.၇ ဘီလျံ)အထိ ရောက်ရှိ လာပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်သွင်းမှု၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကို ဂျာမဏီနှင့် နယ်သာလန်သို့ တင်သွင်း ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာသီဟိုဋ္ဌ်စေ့တင်ပို့သူများအနေဖြင့် သေးငယ်သော်လည်း အလျင်အမြန် ကြီး ထွားနေသည့် အခြားစျေးကွက်များသို့လည်း ရောင်းချနိုင်ပါသည်။ အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားနေသည့် အခွံမာသီးစျေးကွက်မှာ ပိုလန်ဖြစ်ပါသည်။ အီးယူသီဟိုဋ္ဌ်စျေးကွက်တွင် အဓိကပြိုင်ဘက်များမှာ ဗီယက်နမ်နှင့် အိန္ဒိယဖြစ်ပါသည်။ ဦးဆောင်တင်သွင်းသူများမှာ အိုင်ဗရီကိုစ့်၊ ဂီနာ-ဘစ်ရှုး(စ်)၊ ဂါနာ၊ တန်ဇန်နီးယားနှင့် ဘီနင် တို့ဖြစ်ပါသည်။ အီးယူနိုင်ငံများသို့ သီဟိုဋ္ဌ်စေ့တင်သွင်းရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းလက်မှတ် (Food Safety Certificate ) တင်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။
အများဆုံးအသုံးပြုကြသော အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ထောက်ခံအတည်ပြုသည့် လုပ်ငန်း စဉ် (Certification Schemes)များ မှာ(IFS, FSSC 22000, BRC) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ချက်များကို ဝယ်ယူမည့်သူများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။ အီးယူမှ သီဟိုဋ္ဌ်စေ့ ဝယ်ယူနိုင်ချေရှိသူများကို ကုန်စည်ပြပွဲများ၊ အီးယူအဖွဲ့ဝင်စာရင်းများတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိ နိုင်ပါသည်။
အီးယူ၏ ထောပတ်သီးစျေးကွက်သုသေသန (EU Market Scan-Avocado)
အီးယူ၏ ထောပတ်သီး(Avocado)အဓိကစျေးကွက်များမှာ ပြင်သစ်၊ ဂျာမဏီ၊ စပိန်နှင့် ဗြိတိန်တို့ ဖြစ်ကြပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် နယ်သာလန်မှတဆင့် တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နယ်သာလန် တစ်နိုင်ငံ တည်း၏ တင်သွင်းမှုမှာ ဥပရောပသို့ တင်သွင်းမှု စုစုပေါင်း၏ တစ်ဝက်နီးပါးခန့်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေဆီလွှာနှင့် ရာသီဥတုသည် ထောပတ်သီး စိုက်ပျိုးရန်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့် ထိပ်တန်းထောက်ပတ်သီးများ ထွက်ရှိသော်လည်း ဟက်စ် (Hass) ထောပတ်သီးကိုမူ စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပါ။ နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ရေစီးကြောင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဟက်စ် (Hass) ထောပတ်သီးများကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သင့်ပါသည်။ ဤသို့ စိုက်ပျိုးရန် လုပ်ငန်း စဉ်များ စတင်နေပြီဖြစ်သော်လည်း အချိန်တစ်ခုယူရပါလိမ့်ဦးမည်။
အီးယူ၏ ဖရဲသီး စျေးကွက် (EU market for fresh melons- CBI Report)
ဖရဲသီး(Melons)သည် ဥရောပတွင်အဓိကစားသုုံးသည့်သစ်သီးတမျိုး ဖြစ်သည်။အရသာရှိမှုနှင့်စားသုံးရန်လွယ်ကူမှုတို့ သည်ဖရဲသီး ၏အဓိကအားသာချက်များဖြစ်သည်။အီးယူ (EU) ရှိ ဖရဲသီးစျေးကွက်တွင် ဥရောပရှိဖရဲသီးစိုက်ပျိုးသူများ ထံမှ တင်သွင်းပြီး လိုအပ်သည်များကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှ မှာယူသည်။
ယင်းစျေးကွက်သည်ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောစျေးကွက်ဖြစ်ပြီး ဖရဲသီးတင်သွင်းသူများအနေဖြင့် တင်သွင်းမည့်ဖရဲသီးဖရဲသီး၏ အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပြိုင်ဘက်များထက်ပိုမိုသာလွန်နေစေရန်
အီးယူ၏ ကျွဲကောသီးစျေးကွက် (CBI အစီရင်ခံစာ)(EU market for Pomelo- CBI Report)
ကျွဲကောသီး(Pomelo)ကို ဥပရောပရှိ သစ်သီးများ တင်ပို့သော ဆိပ်ကမ်း(အထူးသဖြင့် နယ်သာလန်ရှိ ဆိပ်ကမ်းများ) မှ တင်သွင်းပါသည်။ ကျွဲကောသီးအစိမ်းသည် ဥပရောပတွင် အမြတ်အစွန်းများသော စျေးကွက်ဖြစ်ပါသည်။ ဥရောပ အရှေ့ပိုင်း နှင့် အလယ်ပိုင်းစျေးကွက် များတွင် ကျွဲကောသီးအစိမ်းဝယ်လိုအား ပုံမှန်ရှိသော်လည်း ဥရောပအနောက်ပိုင်း တွင် ရောင်းချရန်အတွက်မူ ကောင်းမွန်သော အရသာရှိရန်နှင့် အားကောင်းသော ရောင်းအားမြှင့်တင်မှုပြုလုပ် ရန်လိုအပ်သည်။ ပစ္စည်းအမြောက်အများ ထုတ်လုပ်သည့် စျေးကွက်ပုံစံသို့ ပြောင်းလဲလာသည့် တရုတ်ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများသည် ကျွဲကောသီးတင်ပို့သူများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။
Myanmar EU Trade Help Desk
Analyse Trade Statistics
Access CBI Reports
© 2019 MYANTRADE
Exporter Directory Marketplace Login Contact